BioPerine နှင့်အတူနနွင်းသင်၏အခမဲ့ Bottle သရယူပါ! - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ » BioPerine နှင့်အတူနနွင်းသင်၏အခမဲ့ Bottle သရယူပါ!
သာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်, ကျော်သိပ္ပံသဘာဖြည့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုများအတွက်နနွင်း၏ပုလင်းကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခမဲ့! သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အားလုံးသည်ရေကြောင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအဘို့အသေးငယ်တဲ့ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤ အခမဲ့နနွင်းကမ်းလှမ်းမှုကို ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသည်နောက်ဆုံးမှအနေဖြင့်တရားဝင်သည်။
ဤသည်မှာသင်စုစုပေါင်း ၆၀ ပုလင်းပုလင်းဖြစ်ပြီးသင်အခမဲ့ရသောနမူနာမဟုတ်ပါ။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး လျှင် ၆၅၀ မီလီဂရမ်အမြှေးပါးအပြင် BioPerine ပါ ၀ င်သည့်နနွင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် -
မန်းဂနိစ် (44%) - မန်းဂနိစ်သည်ဆက်နေသောတစ်သျှူးများ၊ အရိုးများနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုကူညီသည်။ ဒီအရောအနှောရှိအခြားတ္ထုများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ၎င်းသည်သင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုလည်းကူညီသည်
သံ (14%) - သံကပရိုတင်းဓာတ်တွေကိုဇီဝြဖစ်ပျက်စေတယ်
ဗီတာမင် B6 (5%) - ဗီတာမင် B6 သည်သင်၏အရေပြား၊ မျက်လုံး၊ ဆံပင်နှင့်အသည်းကိုတိုးတက်စေသည်
ဖိုင်ဘာ (10%) - ဖိုင်ဘာသည်အစာကိုသင်၏အစာခြေလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားစေပြီးသင်၏အူအတွင်းရှိရောင်ရမ်းမှုများကိုကူညီသည်
ကြေးနီ (9%) - ကြေးနီသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကော်လာဂျင်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးသံဓာတ်စုပ်ယူသည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်
ပိုတက်ဆီယမ် (3%) - ပိုတက်ဆီယမ်သည်သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအက်ဆစ်များနှင့်အခြေခံများကိုထိန်းထားရန်လည်းအရေးကြီးသည်
ဗီတာမင် K သည် (8%) - ဒဏ်ရာများကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် Vitamin K သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်
ကယ်လ်ဆီယမ် (3%) - ကယ်လစီယမ်သည်သင့်တော်သောအရိုးနှင့်သွားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အပြင်အူမကြီးကင်ဆာနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေရန်ကူညီသည်
ခရိုမီယမ် (4%) ခရိုမီယမ်သည်သကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အင်ဆူလင်ကိုဂလူးကို့စ်အားသကြားဓာတ်ကိုဆဲလ်များသို့သယ်ဆောင်ရာတွင်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နနွင်းအခမဲ့ BioPerine ဖြည့်စွက်ချက်ဖြင့်ရယူရန်။
နနွင်း၏ 1 ပုလင်းထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါသလား? သူတို့ကအစသင်အပြည့်အဝ $ 1 လက်လီစျေးနှုန်းမှာ 49 ပုလင်းဝယ်နိုင်နှငျ့သငျအခမဲ့3ပိုပြီးနနွင်းပုလင်းရနိုင်ရှိရာတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သဘောတူညီချက်ရှိသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဆိုပါယ်ယူရန် 1 များအတွက်3အခမဲ့သဘောတူညီမှုကိုရယူလိုက်ပါ